Home Wararka Turkiga oo qayb ka noqday dagaalka caawa & ciidankii TURKSOM oo dagaalka...
Turkiga oo qayb ka noqday dagaalka caawa & ciidankii TURKSOM oo dagaalka hogaanka u haya
Sida ay noo xaqiijeen ilo lagu kalsoon yahay, ciidamada weerarka soo qaaday caawa ayaa waxa ay ka soo baxeen Xarunta TURKSOM ee ku taalo duleedka Xeebta Jazeera. Ciidanka oo ka kooban labo urur oo ku hubaysan dabaabaaadka ay soo saarto Turkiga ayaa dagaalka hogaaminaya.
Waxaa nasiib xumo weyn ah in dowlada Turkiga oo shacabka Soomaaliyeed u hayaan qadarin iyo jaceyl balaaran in ay si aan gabasho lahayn u difaacayaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Farmaajo. Dhimashada caawa ka dhacaysa Muqdisho waxaa gaysanaya ciidan iyo hub ay dowlada Turkiga leedahay ama ay soo tababartay.
Dhanka kale Midowaga Musharaxiinta ayaa qoraal ay soo saareen uga digay Dowlada Turkiga in ay qayb ka noqoto dagaalka u dhaxeeya mucaaradka iyo dowada waqtigeeda dhamaday.